Murti Dahsoon oo Macne Badan: May 2007
Dadweynow Ka Jawaab Q2-aad
Dubbe:Waar waakan soo hagaagaya qaadkii. Iminkaa la cuni karayaa dee. Oo awal biyo ayuu ahaaye.
Doolaal:Haa. Ayaamahanba sidaasuu ahaa. Wuu soo adkaanayaa. Laakiin anigu Faysal Cali Waraabe ayaaban ku raacsanay in bahalkaa layska daayo oo laynaga joojiyo. Waakii maalintii dhawayd yidhi ha layska daayo oo umadda ha laga joojiyo.
Dubbe:Waar malaa muu odhane? Ma haddana?
Doolaal:Ma mar hore ayuu sidaa yidhi?
Dubbe:Dee malaa markay doorashooyinku soo dhowaadaan buu qaadka xusuustaaye. Waakii doorshadii hore sidaas oo kale u hadlay. Tolow haddaba halkuu wax ku wadaa?
Doolaal:Muxuu wadaa ee aad sheegaysaa? Dee dadkuu la talinayaa.
Dubbe:Talada ma diidaniye. Waxaan is weydiinayay. Haddii u codna doonayo haddana ganacsigii codbixiyeyaashiisa uu is hor taagayo sidee arrintaasi noqonaysaa? Markaa ma Awdal buu cod u doonanayaa?
Doolaal:Waar illayn Awdal dalkay ka mid tahay hadduu u doonto eh. Maxaad uga jeeddaa adigu?
Dubbe:Waxaan uga jeedaa, malaa shanshubka ayuu kuugu dhacaaye oo hadalka oo dhan baad debedda iga keenaysaaye, hadduu degmooyinka Maxamud Haybe iyo Salaxley ee saldhiggiisa ahaa ganacsigii iyo odayaashii watay duqeeyo, oo uu Gacan libaax, Sabawanaag iyo cadaadlayna yidhi isku burji baanaan ahayn. Woqooyiga iyo Galbeed Hargeysana ka yara biyo diiday oo yidhi “ma nimanka Ina Rayaale iyo Siilaanyo iga doortay anigoo reer Hargeysa ah oo weliba abtina lay yahay?”. Bariga Burco iyo Galbeedkeedana khadkii u dhexeeyay waa la qaaday oo ay hadda dhinac isugu baydhay oo aanay meeli ka bannaanayn, Balli Gubadlana uu is caddeeyey. Ma Ina Rayaale ayuu marti uga noqonayaa qaybta yar ee uu Awdal ka haysto? Sawta la yidhi dhankaa martida waxa la yidhaa “soo meero”
Doolaal:Inaadeer horta nin xun oo lafta ka xun baad tahay. Bal waxaad ku hadlayso eeg? Ninka madaxda ahi waa inuu runta sheegaa xataa haddii aanay dantiisu ku jirin. Waa inuu umadda uu madaxnimada ka doonayo danteeda ka hadlaa.
Dubbe:Haa wuu ka hadli karaa danta umadda. Anigu Guddoomiyaha wax deelqaafa kuma odhan. Inuu guulaystana waaban jeclaaye. Wuxuumbaan leeyahay Gudoomiye codad baad u baahantay. Codadkiina, waday oo waday oo wadayoo meeshaa aad ka deydayeyso ee Madaxtooyada iyo la bahowga Ina Rayaale iyo afartii Wasiir ee aad tidhi dalka ha laga qabto waa casaabad tuug ahe(midkoodna ma maqal Xajkii buu tegey oo wuu toobbad keenay) si codad loogu helayo arki waayay. Aniga waa iga talo uun dee. Haa. Ceeb kale ma jirto. Waar taa halkaa ku dhaafoo Guddoomiyahu xaal ha qaatee adigaa kolba na soo hor marinaya oo munaafaq ahe, su’aalahii aan dadweynaha weydiinayay baan qaybtii ii hadhanayd dhammaynayaa ii kaadi.
S. 13aad: Dadweyne waxay ognahay in uu Madaxweynuhu marar badan magacaabay guddiyo uu u xilsaaray inay soo baadhan falal dhacay. Waxa ka mid ahayd a)Guddidii Jeelka ee maxaabiistii baxsatay baadhaysay b) Guddidii Ciidamadii Booliska ee kacdoomay c) Guddidii dhacdadii Dhakhtakar Hargeysa d) Guddidii dhacdadii Dumbuluq iyo qaar kale. Wax war ah oo midkoodna ka soo baxay ma jiro. Maxaa haddaba u malaynaysaan inuu marka horeba uga jeedo? Ma idinka ayuu idinku jeedinayaa oo arkay inaydaan laba cisho gudahood arrin xusuusnaan karin? Ma wax la qarinayo ayaa jira oo cid baa loo xaal mastuurayaa? Ma ka itaal baa oo waa ka bes xukuumadda oo xilkeeda ma gudan karto?
S. 14aad: Ballamadii badnaa ee Madaxweynuhu ka qaaday inuu dhibaatada dhulka ka dhalata wax kaga qabto weli lama hayo. Maxaa hor taagan baa u malaynaysaan? Dadka qaar waxay leeyihiin musuqmaasuqa guud ee xukuumaddu dalka ka waddo ayay ka mid tahay. Sidaa miyaa u malaynaysaan idinku?
S. 15aad: Madaxweynaha waxa caado ama dhaqan u noqtay inuu ganacsiga ka dhigo waxa loo yaqaan Monopoly oo uu gacan keliya isgu geeyo. Ta adhiga ayaynu ka war hayna, ta Total baynu ognahay. Wuxuu isku deyey inuu qaadka ku wareejiyo nin ay isku reer yihiin oo deggan Diridhabe, wayse u suura geli wayday. Wuxuu weli wadaa inuu isgaadhsiinta ku wareejiyo wiil uu adeer u yahay oo sharikadaha kale oo dhammi hoos yimaaddaan isaga. Wershaddii sibidhka wuu u diiday inay maalqabeenada Somaliland maal gashadaan oo Jarmal buu la raadinayaa oo yidhi waan siiyay. Maxay arrimahaasi idiinla eg yihiin? Ma u egtahay inuu ku wato dan gaara oo u hawl yaraanaysa markuu qof qudha gacanta u geliyo? Muxuuse u diidayaa inuu golaha Wakiilada hor keeno heshiisyada uu la galo shirkadaha ajaanibka ah sida Distoorku dhigayo?
S. 16aad: Laydh ama koronto ayaa Ethiopia innooga imanaya oo Meles baa inoogu deeqay ayuu madaxweynuhu inagu yidhi dhawr jeer. Koronto ha joogtee gaarabidhaan Ethiopia leedahay oo ina soo gaadhay miyaa weli aragteen? Wax mashruuca oo waxaa ku saabsan oo meelna ka socda ma ragteen?
S. 17aad: Maxaa u malaynaysaan, halkay ka dhacday idaacaddii miisaaniyad walba ku jirtay ee xukuumadda Rayaale ku ballan qaadaysay afarta sanadood? Xukuumadda doolarkeenii wax inoogu soo iibin kari weyday wax kale ma inoo soo dhicin kartaa baa u malaynaysaan?
S. 18aad: Dad badan oo jeelasha ku jira oo dil lagu xukumay racfaankiina dhamaystay baa jira oo madaxdhaqameedyo badnina ku dhawaaqeen fulinta xukunkaa sharciga ah oo ku xidhan Madaxweynaha. Muxuu u hor taagan yahay baa u malaynaysaan xukunadaa u adeegaya nabadgelyada iyo xasiloonida qaanka?
S. 19aad: muxuu derajadii ciidamada u bixin waayay baa u malaynaysaan Madaxweynuhu?
S. 20aad: Madaxweynuhu wuxuu sheegay inuu ka war hayo dawada dalka timaadda ee aan tayada lahayn. Waxa kale oo sheegay inuu sharci ka soo saarayo arrintaa lagu toosiyo. Saddex sano ka hor bay ahayd. Muxuu la qabanayaa baad filaysaan? Xaalkiisu ma iska dheh uun ma idiinla eg yahay?
S. 21aad: Madaxweynuhu wuxuu yidhaahdaa waa lay qabyaaladaynayaa marka wax laga sheego maamulkiisa ama dhalliil loo soojeediyo. Arrinkaasi run ma yahay oo miyay jirtaa in la qabyaaladaynayo?
S. 22aad: Wuxuu ku ballan qaaday Madaxweynuhu inuu dalka shareecada ku dhaqayo oo uu khudbaddiisii iidda ku sheegay. Guddi baan u saarayaa ka soo talisa sidii loo dabbiqi lahaa shareecada ayuu yidhi. Weli lama hayo. Muxuu u samayn waayay arrintaa markaad qiyaastaan? Ma idinla tahay inuu Maxaakiimtii ka baqayay berigii ay inoo hanjabayeen oo ay intaas iyo baqe uun ka ahayd?
S. 23aad: sharikadahii badnaa ee uu yidhi Madaxweynuhu waxay ka imanayaan Koonfur Afrika ( South Africa) oo dalkay maal gashanayaan ma war haysaan inay yimaadeen iyo in kale? Weli shirkad dalkaa ka timi oo shaqaale qoranaysa ma aragteen?
S. 24aad: Su’aasha u dambaysaa. Dadweyne adigoo mahadsan, Guurtidu ma buuxisaa kaalintii aynu u samaysannay mise way gabtay?
Waa inoo toddobaadka dambe. Haddii Eebe yidhaado.
Posted by Daljir at 7:26 AM 6 comments:
Posted by Daljir at 8:47 AM No comments:
Dahir waan aragnoo dib u aamini mayno
Dubbe:Waar heedhee horta fanaaniintan yar ee iminka cajaladaha ka heesa midhaha ma Ina Xaji Dahir baa u sameeya? Weligey waxaa wax ka midho liita ma arag.
Dolaal: "Waraabow bood oo xagga cadka u bood." Baa la yidhi. Heesa xumida uun maad ku deysid maxaa wasiirkana kuu geeyey? Waar illayn gardarro...
Dubbe:Dee illayn xikmad xumi baynu ka hadlaynaa nin walibana wax buu caan ku yahay. Cajalad uu mar dhawayd yarka darawlaka ahi dhegeysanayay ayaan u fiirsaday. Mid wuxuu yidhi "Marna jaaha iyo jilbaha maysa saarnaa." Midna wuxuu yidhi . "jaleecadadaadii surka igu jaba." Kkkkk hadda waa wallaahi. Mid kalena wuxuu yidhi. " Kii i kaa baray baan boqol jeer ku weydiiyaa." Mid kalena wuxuu yidhi. " Ubax carro ka baxay oo xidadiisu wadna ka soo baxay baad tahay." Gabadhina waxay tidhi. "waadigii i diiday eh, waxba iima soo wadide." Mar kalena waxay tidhi. " noloshaba hadaanad aqoon naayaa haygu odhan niyaddana hayga jebin." Qoodhaa iyo xeradaa Ina H. Dahir mooyee cid kaloo sidaa wax u tirin lahayd miyaad garanaysaa? Xikmad yare. Horta Dhahar dabadeed miyaan kaana juuqba laga hayn?
Doolaal:Waar waxaa iska dhaafoo Xaaji Cabdi Waraabe ma dhegeysatay markuu lahaa Madaxweynaha aamina?
Dubbe: Horta waan dhegeystay Xajiga. Wax xunna muu odhan. Midhkaa aaminaaddana waynu ka wada hadliye hay dambeeyee. Waxaanse ku sheegayaa. Horta odayaasha waaweyn, Ilaahay baa weyne, waxba odhan maayo. Waayo, raggaa wada xayeeshka aah markay dhintaan ayuumbaynu garanaa qiimahooda. Waana ta labaade horta waa wax dabiiciya oo da'da ayay la socotaa inuu nin oday ahi dadka waaniyo oo weliba waxaa ay haystaan ama gacantooda ku jira yidhaahdo waar daysta.
Waayo, cilmi nafsiga ayaabay sheegay oo ma jecla inay wax is bedelaan oo wareer bay la tahay. Bal u fiirso oo intaa odayaashu markay gurigooda joogaan waxay leeyihiin " Naa ya kabahaygii halkan ka qaaday? waar yaa ushaydii arkay? Waar yaa koofayadii iga qaaday?" markaasay islaantu tidhaa. " ee kabaha anigaa illinka ka duway oo dhankaa u yara leexiyay waa kuwa isla halkii uun yaal. Ushii anigaa tiiriyay oo is idhi wuu ku kufi . Koofiyaddii waan maydhay oo waaniga cimaamadda dul saaray." Markaasu yidhaa. " Haa. Hayga qaadina alaabada. Waxaan mooday in kabahii layga illaday eh." Wax kale iska daayo haddii durraaxadda sariirta laga beddelo way ku caaroodaan. Markaa ma jecla waxaa ay garnayaan wax bedela ee Xajiga iska illaw.
Mahadsanid. Noolow Xaji. Inta kuu hadhay talada noo badi Xaaji. Dee haa. Maxay ina yeelaysaa? Waynu iska diidi waxaynu garan weyno eh.
Xaji, arrin yarna aan ku dareensiiyee, beryahaa kamaad war hayne, mutacalimiinta Garxajis Ina Buuba iyo Jamac yare way ka badan yihiin. Haa. Qaar badan baa soo kordhay Xaaji. Dhankan Somaliland ta ayaanay u badan yihiin. Tolow may maqlayaa?
Dadkuna iminka waa isku mid Xaaji. Arrimihii yaryaraa way iska dhamaadeen. Sideedabana iminka lama kala ilbaxsana. Qolona qolo kuma shaqaysato. Haa. Xaaji. Waa sidaa. Ina Gaboose na, Habar Awal soomay dirin. Ururka ayuumbay kula jiraan, sidaad adiguba xisbiga Samaroonta ugu jirto.. Qaar inkaari ku dhacday baa Xaajiga waalayee. Tolow ma Cawil iyo Ina Sulub buu xalay arkay xaajigu oo ku yidhi Habar Awal baa ina Gaboose ka dambaysa? Nolow Xaaji. Cimrigaa ha jiro.
Doolaal: Maxaad ku diidday hadduu yidhi Madaxweynaha aamina?
Dubbe: Horta Madaxweynahaad sheegaysaa sidii aan ku aamini lahayn ma yeelay baa ka horraysa?
Doolaal: Oo muxuu dhimay? Sawkaa dadaalaya maaha.
Dubbe:Eeg. Uma baahnid inaad indhaha iska riddo. Qof madaxa waxa lagu aaminaa marka u horraysa markuu raaco sharciga iyo xeerarka. Marka labaad markuu fuliyo ballanka uu ama dadweynaha u qaado ama qofba u qaado oo uu runta yaqaan. Marka saddexaad markuu dadka kala jaadka ah ee qaranka xilalka kiisa la siman u haya uu la shaqeeyo ee uu u xog warramo. Markuu dadweynaha uga xaal warramo waxay tabanayaan ee jiritaanka dalka khuseeya. Marka aanu musuqmaasuq ahayn. Marka aanu isku xeerin la taliyeyaal beenta iyo musuqa yaqaan. Intaas oo xaalo ninka aan midna ka lahayn sidaad u aaminaysaa adigoo la mid ah mooyaane? Waar kaa iska dhaafoo Xaajiga waxaad ku tidhaa:
Xaaji waa oggoloo
Oday weeye midhkiiye
Ninkaad aamina leeday
Malaa waanad ogayne
Wuu amuur badanyoo
Sida weeye Ibliiska
Inyarood ku jirto
Dhanka ay ka arkaan
Aadmiguu u dhigmaayoo
Weliba waa edeb miidhan
In haddaad geliso
Saari maayo ilkaayoo
Axna soo celin maayoo
Arxankaabad la yaabi
Dhanka ay arkayaan
Daahir waa orgome
Waa inkaaro hagoogan
Waa abeesada duuban
Abris weeye dilaaya
Ishuu noo nabayaayoo dib u aamini mayno
Arligii kharribyoo dib u aamini mayno
Indhahuu ka riddoo dib u aami mayno
Aakhiruu u diroo dib u aamini mayno
Axdiguu jebiyoo dib u aamini mayno
Ibtiluu noqdayoo dib u aamini mayno
Amakaag na badyoo dib u aaminimayno
Asquu qaybiniyaa dib u aaminimayno
Golahii inkiryoo dib u aamini mayno
Albaabkuu ka xidhoo dib u aamini mayno
Xukunkii amimyoo dib u aamini mayno
Afduub buu ku wadaa dib u aamini mayno
Anfaciina xadyoo dib u aamini mayno
Adduunkii gurayoo dib u aami nimayno
Adhigii rarayoo dib u aamini mayno
Aadan baa u gadoo dib u aamini mayno
Iskraabka dhacyoo dib u aaminimayno
Aqallaabu dhistaa dib u aamini mayno
Askartii qadiyoo dib u aamini mayno
Ardaydii lumiyoo dib u aamini mayno
Agoomii dayacyoo dib u aamini mayno
Estii (SNM) buu necebyoo dib u aamini mayno
Odayaal firdhiyoo dib u aamini mayno
Addis buu u dusaa dib u aamini mayno
Arrimuu la galaa dib u aamini mayno
Inay Yey la shiryoo dib u aamini mayno
Isna wuu la wadaa dib u aamini mayno
Daahir waan aragnoo dib u aamini mayno
Udub baa ka dartoo dib u aamini mayno
Waa inoo toddobaadka dambe, haddii Eebbe idmo.
Posted by Daljir at 12:00 PM No comments:
Rafiiq, Wallaahi Anaa Maa Fii Raqaba..Anaa Fii Yed
Dubbe:Waar waxani caddaalad xumu ka badane tan Maxkamada xaggaynu ka qabanaa? Miyaanaan waayaynba kolba mid ooman oo daf ina soo yidhaa? Waar yaa Ilaahay yaqaan?
Doolaal:Maxaad isla waalaysaa? Iminkaad madaxda aflagaadayne. Maxkamaddu saw sharciga tafsiil kama bixiso.
Dubbe:Waxaan ku weydiiyay. Dunida kale Qareenada iyo Garyaqaanada iyo dadka noocaasi way iska ladan yihiine kuweenani halkay ku soo oomeen? Oon idin laa. Oomane buu yidhi. Qoodh iyo xaro wuxuu u haystaa hadduu Ina Rayaale ka soo hor jeesto in risiiqii go'ay. Waxa la yidhi nin Hawiye ah oo Muruusade ah ayaa nin reer Somaliland ah gabadh- waa intii aan lays baran- waydiistay. Markaasu haybsaday.
Wuxuu u sheegay inuu Muruursade yahay. Ninkii reer Somaliland walaakii oo beri Xamar ka shaqayn jiray buu weydiiyay Muruursade. Wuxuu ku yidhi "Abgaalka ayaa markay caydhoobaan Muruursade noqda." Intuu ninkii inanta ka doonayay ku soo noqday buu ku yidhi "Adeer waad wanaagsantay oo si fiicanbaad yeeshay mar haddaad arrinka na soo gaadhsiisaye, laakiin adeer markaad Abgaalkaagii ku noqoto ee Maruursanimada ka baxdo haynoo ahaato." Iminka anigu weligay ma arag nin Bari ka yimi oo Oomane la yidhaaye; bal inta uu oonku ka baxayo ee uu Mujaahidnidaiisii ku noqonayo aan iska sugno dee bal in Ilaahay caddaaladda tuso.
Doolaal:Waar Maxkamddu si caddaalada bay u xukuntay kiiskii markay labadii dhinacba dhegeysatay. Weliba doorkan labada dhinacba way dhegeysatay oo kiis dhan bay qaaday. Marka hore aydin dadka jujuubayseen oo aydaan sharci ku socon
Dubbe:Caddaalad buu yidhi. Wallaahi Sucuudiga ka caddaalad xun. Ma nimankan wixii la weydiiyay mooyee wax kale kugu xukumaya ama ku daraya mar walba ayaad leeday caddaalad bay yaqaanaan? Wallaahi waxaan xusuustay nin Pakistani ah oo Sucuudigu ku soo masabiday tuugo oo ku xukumay in gacanta laga jaro. Ninkii oo qolkii jeelka ka ooyaya oo leh "wallaahi rafiiq anaa maafi xaraami." ayaa lagu soo xidhay isla qolkii afar kale oo Pakistan ah oo maandooriye lagu soo qabtay oo dil qoortoo laga jaro ah lagu xukmay. Subaxii dambe ayaa askari albaabka furay. Afartii dilka ahaa saddex ka mid ah iyo kii tuugada loo haystay buu waraaq ka yeedhiyay. Soo baxa buu yidhi waa laydin qisaasayaa. Kii in gacanta laga jaro lagu xukumay ayaa qayliyay "rafiiq, anaa wallaahi ma fii raqaba. Anaa fii yad. Anta maa fii khoof rabbak" Gacantii uu diidanaa ayuu oggolaaday oo yidhi wallahi aniga gacanta in layga jaro ayaa laygu xukumay ee in qoorta layga gooyo layguma xukumin. Askarigu warqaddan ayuumbuu akhriyayaa "soo bax buu yidhi. Kii dilka ahaa ee afraad baa jooga oo leh "waar dee aniga weeye ninka dilka ahi ee ninkan miskiinka iska daa" "uskut yaa kelb" intuu yidhi oo dhirbaaxay ayuu kii kale kexeeyay. Iminka waynu ladanay haddaanu Oomane xukumin in Golahu sharci darro ku fadhiyo oo la kala dareeriyo.
Doolaal:Waar muxuu ku hadlayaa?oo meeshu Sucuudigu caddaalad xumaa. Waar adaa waxaa malaa samaystay?
Dubbe:Wallee waxan aad maxkamada ku sheegeysaan ee dadkii nafta ugu keenteen iyo dalkii waa kuwaas sucuudiga oo kale. Haddaanay ka liidan. Iyaga Sucuudiga mar mar baabad nin Ilaaahay ka yaabaya arkaysaa. Idinkuna wax walba intaa tidhaahdaan "maxkamadda ayaanu geyneynaa" Illayn waa naasweynba dihine ayaydaan caddaaladna qaadayn. Haddaba Golahu "tunka ha ka leefo ilmada ka tiixaysa" waa kuwii gacmaha badan u taagay ninkan Ooman iyagoon iska hubsanne. Waar bal horta ninka su'aalo weydiiya ayaanu ugu taag weynay. Iminkaba Guddoomiyaha dambe ee la keeno inaga hubsada inaanu Oomanayn, waa inuu noqdaa mid buraashaddiisa sita.
Doolaal:Waar illayn oomanaantiisa adigu wax ma siiside "gari laba nin kama wada qosliso" baa la yidhi ee gartaada qaado oo oggolow qaraarka.
Dubbe: Dee horta wax kale oo ii banaaniba ma jiraan laakiin Ilaahay hortii dalkii cawaaqib xumo ayaa dhaxalsiiseen. Oo hanjabaadii uu Cawil TVga la soo fuulayna maxay ahayd? Ma Wasiirka Arrimaha Gudaha ayaa laga dhigay?
Dubbe:Dee markuu qoladan Qaran u hanjabayay ee uu lahaa "waxaan idiinku ballan qaadayaa inaanu sharciga hor keeno."
Doolaal:Horta qofkii sharciga jebiya waa la horkeenayaa dee. Taa maxaad ku diidantay?
Dubbe:mar markaan cadho la dhiman gaadhaa waa markaan kibirkiina arkaa. Waar ninka muwaadin ah ee waxa uu u arko inuu xaq u leeyahay sheegtaa ama raadsadaa ma dembi buu galay. Waa maxay hanjabaadu. Xeerkan aad ku ordayso ee "anaa maafii raqaba" u baadh dee marka hore inuu waxan muwaadinku rabu xaq u lee yahay iyo in kale. Maxaa wareerkaba keenay? Maxaa keenay ha hadlina? Miyaanad ogeyn in muwaadiniintu is abaabulaan oo wax aan xeerkaba hore ugu jirin xukuumadda ka dalbadaan? Waar iska daaya jahligan guulwadaysan.
Doolaal:Maxaad ka waddaa?
Dubbe:Waxaan ka wadaa. Muwaadiniinta tidhaahda urur siyaasadeed baanu furanaynaa xeerka uun u baadh. Ma oggol yahay? Haa. Sii ruqsad. Ma oggol yahay? Maya. U sheeg inaanu xeerku oggolayn qodobka diidayna u sheeg oo maxkamaddu ha xukunto. Golayaasha qaran ha xukumaan. Ha laga doodo. Danta umadda ayaa ku jirta in muwaadinku wax raadsado lana qanciyo. Laakiin hanjabaad caantayni inna dhiqi mayso.
Doolaal:Waar waan kacayaa Madaxweyne Ku-Xigeenkii baa Ingriiska u dhoofaya oo aan sii dhaweynayaa haysii yaallo qaadku. Way ii tirsan yihiin qoryahu. Dheg ha la bixin iminkaba.
Dubbe:Waar qaad haddaan xadayo wax ka fiican baan xadi lahaaye oo xisbigiinaan soo geli lahaaye. Wadaadkii ma siyaaradii Sheekhaa la fogaatay oo uu carro Ingriis ka soo gurayaa? Mise Ingriis Carre ayuu maqlay oo inaynu wax isu nahay buu moodayaa? Mise colkuu colka gaadhsiinayaa oo dhulkii Ina Rayaale soo maraybuu isna soo marayaa? Ta kale doorkan ii soo duceeyaba muu odhan wadaadkuye. Malaa Ingriiskaa Dhahar ka dhow. Tolow intaa uu maqan yahay yaa yidhaa Aar Guruxeed ka sii gaadhsii oo siyaarada gur... Aar day..nacallaba.. waar ka gaadhsii...
Doolaal:Wefti ballaadhan oo Wasiirro iyo cid walba leh ayuu hor kacayaa qadiyadeena ayuu adduunka gaadhswiinayaa? Maxaa ku jaban taa?
Dubbe:Qadiyadda miyaan Cadillaahi Maxamed Ducaale iyo Cawil ku filnayn? Ma wax kalaa la soo qabtaa saw maha in la yidhaa " marti qaadbaanu hellay, khadiifad cas baa naloo dhigay, cashaa naloo sameeyay madaxdiina shir baanu la yeelanay oo qadiyadeenaanu u sheegnay. Weftina way soo diri doonaan. Inta kalena waanu qarin oo cadawga maqlaya"
Waa inoo toddobaadka dambe, haddii Eebbe idmo
Waxa Qoray. A. Geeljire
Posted by Daljir at 10:28 PM 5 comments: